School တွင်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » School တွင်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် 500 es ပေါင်း 500 ms
School တွင်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် 500 es ပေါင်း 500 ms APK ကို
ဤသည်အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်အပေါင်းတို့, တဦးတည်းဂဏန်းတွက်စက်, အပြည့်အဝသင်္ချာ function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကသိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် 500, 500, 570 ms, 570 vnplus, 991 es ပေါင်း, 991ms, 570 es ပေါင်း, 82 သို့မဟုတ် TI-30XB, 4500, 82ms, 82es, 82AU PLUS II ကို, 100AU, 4500pa, 991 ၏အင်္ဂါရပ်များအများဆုံးထောက်ခံပါသည် ဟောင်း, 260 ။ သဘာဝ display ကို★★
သဘာဝ Input ကိုသငျသညျပိုငျး, အမြစ်များ, ကိန်းနှင့်ပိုပြီး အသုံးပြု. စက္ကူပေါ်မှာရေးထားချင်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့ညီမျှခြင်းဝင်ခွင့်ပြု။ ဒါဟာ "သဘာဝ display ကို" ဟုခေါ်နှင့် 570 991 es ပေါင်းနဲ့တူသိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက်ပေါ်မှာဘုံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ !.
★ Scroll အင်္ဂါရပ်★
လက်ဝဲနှင့်လက်ယာချ cursor တက်ရွှေ့ဖို့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာပွတ်ဆွဲပါ။ စကားရပ်ကိုတည်းဖြတ်ရန်ထိပါ။
★ Calculator လုပ်ဆောင်ချက်ကို, အဆင့်မြင့်ဂဏန်းတွက်စက်အင်္ဂါရပ်★
•ညီမျှခြင်းဖြေရှင်း (Shift ဖြေရှင်းနိုင်)
(မှတ်ဉာဏ် function ကိုအတူ 8 variable ကို) • Calc function ကို
•အနကျအဓိပ်ပါယျ function ကို
• function ကိုပေါင်းစပ်
•အခြေစိုက် N ကိုတွက်ချက်မှု (Calculator ကို binary, ဒဿမ, hexadecimal octal)
•စားပွဲတင်မီးစက်: စကားရပ်အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာအခြေစိုက်စခန်း generate ။
• system ကိုညီမျှခြင်း (နှစ်ခုနှင့်သုံးမသိသော variable ကို) ဖြေရှင်း
• In-ညီမျှခြင်း, quadratic, ကုဗဖြေရှင်း
•အစိတ်အပိုင်းရလဒ် (အပိုင်းကိန်းဂဏန်းတွက်စက်) နဲ့ calculate ကို
•ကြီးတွေနံပါတ်များနှင့်အတူ calculate ကို
• Complex အရေအတွက်ကို
algebra ဂဏန်းတွက်စက်၏အပြည့်အဝအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့• Matrix ဂဏန်းတွက်စက်
•လော်ဂရစ်သမ်ဂဏန်းတွက်စက် (အခြေစိုက်စခန်းဎ log)
★ Angle ယူနစ်★
radians, ဘွဲ့, Gradian
★ Output အမျိုးအစား★
•အစိတ်အပိုင်း (1 / 2)
•ရောနှောထားသောအစိတ်အပိုင်း (4 /3= 13/ 4)
•ထပ်ခါတလဲလဲဒဿမ (1.23232323 = 1 ။ (23))
•ဘွဲ့ / မိနစ် / ဒုတိယအ
•အရောင်အသွေးစုံ (Pol, ဖမ်းယူရေး function ကို) ကိုသြဒိနိတ်
Normal, အင်ဂျင်နီယာ, အင်ဂျင်နီယာ (SI), သိပ္ပံ, Fixed
★ပို feature ကို★
•အလိုအလျောက် Calculator: သင် (setting ကိုအတွက်ကို turn off) စာရိုက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တွေ့မြင်
• variable ကိုတန်ဖိုးကိုပြရန်
•နှစ်ဦး layout ကို: အပြည့်အဝကီးဘုတ်နဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကီးဘုတ်
• Copy ကူး, ငါးပိစကားရပ် (ရှည်လျားသောကလစ်ကူးယူ)
ဤသည်အခမဲ့ဂဏန်းတွက်စက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင် access များအတွက်ပရီမီယံဗားရှင်းအားလုံး features တွေ upgrade နိုင်ပါတယ်။
အန်းဒရွိုက်★များအတွက်★သဘာဝသိပ္ပံ Calculator ကို
School တွင်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် 500 es ပေါင်း 500 ms
14.06 ကို MB